Mutengo wesoya beans hausi kufadza | Kwayedza
Mutengo wesoya beans hausi kufadza
08 Sep, 2013 - 03:09	 2014-05-05T07:55:22+00:00 2013-09-08T03:52:11+00:00 0 Views
VARIMI vesoya bhinzi vochema-chema nekudzikira kwakaita mutengo wechirimwa ichi uye vakakurudzira hurumende kuti mutengo uyu ukwidzwe mwaka uno.
Mumwe murimi mukuru wesoya bhinzi, Cde Edward Raradza avo vanorima vari kuCentenary vakati kwemakore anodarika mashanu mutengo wechirimwa ichi hauna kumbobvira wakakwidzwa zvinova zviri kuvadzosera kumashure.
Vakati kune varimi vashoma vanorima soya bhinzi nekudaro kana mutengo uyu ukasakwidzwa zvinogona kukonzera kuti vashomeke kudarika zvavari izvozvi. “Mutengo wesoya bhinzi haufadze zvachose, mwaka wakapera takatengerwa neUS$550 patani inova mari shoma zvikuru tichitarisa zvatinoshandisa pakurima chirimwa ichi, mari yacho zvakare unozoiwana kwapera nguva refu zvinotadzisa varimi kuti tikurumidze kuronga zvinhu zvedu,” vakadaro.
Mumwe murimi zvakare ane mukurumbira kuNyabira, Cde Endy Mhlanga, vakatsinhira nyaya yekuti mutengo wechirimwa ichi unofanirwa kukwidzwa.
“Tiri varimi vashoma zvikuru vanorima soya bhinzi asi kuburikidza nemutengo wacho une mari shoma, hazvifambirane nezvatinoshandisa muminda,
zvinoguma zvaodza mwoyo yevarimi torega kurima. Izvi zvinoreva kushomeka kwekudya kwezvipfuyo munyika nezvimwe zvinogadzirwa kubva muchirimwa ichi,” vakadaro.
Chirambadare otongwa mudare13 Mar, 2015
Varume 2 vakafira mumugodhi12 Dec, 2014
Praesent interdum ac lacinia in30 Oct, 2013
Vakapa muenzaniso wekurega kwakaitwa nevarimi vazhinji kurima donje zvavakati ndizvo zvichaguma zvaitwa kuzvirimwa zvisingabhadhare.
Vakakurudzirawo hurumende kuti ikwidze mutengo uyu nenguva yotsigirawo kurimwa kwesoya bhinzi.
Zvakadaro, sangano rinomirira varimi vesoya bhinzi munyika, reSoya Beans Association, rakati riri kushingaira kuti mutengo wechirimwa ichi ukwidzwe. Sachigaro wesangano iri, VaUsheunesu Mupeperereki, vakati mutengo wesoya bhinzi parizvino haufadze.
“Inyaya yatinogara tichitaura kuti chirimwa ichi chikwidzwe mutengo uyewo nekutsigira kurimwa kwesoya bhinzi nezvinodiwa zvakaita sefetereza, mbeu nemishonga yacho,” vakadaro.